Muqdisho : Nin Sheegay in Walaalkii ay Dishay Hay’adda NISA , Hadana uu Cadaalad waayey [Muuqaal] | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
Muqdisho : Nin Sheegay in Walaalkii ay Dishay Hay’adda NISA , Hadana uu Cadaalad waayey [Muuqaal]
Mar 24, 2020 - 1 Aragtiyood
Muqdisho ( Kalshaale ) Cabdikariim Yuusuf Nuur oo Maanta Warbaahinta kula hadlay Muqdisho ayaa sheegay inuu yahay Muwaadin Soomaaliyeed oo dulman, Wuxuuna sheegay in Walaalkii ay horay u dishay Hay’adda NISA, Balse uu Cadaalad waayey.
“Waxaa walaalkay oo ahaa Wiilkayga oo kale dishay Hay’adda Nabad sugida ee NISA, Wuxuu dhaawacmay 18-05-2015, Wuxuuna Geeriyooday 25-05-2015, Waxaan tagay Xiligaasi Xarunta CID-da, Waxayna Warbixinteeda ku cadaysay sida wax u dhaceen, Sidoo kalena Hay’adda NISA ayaa sheegtay inay bixin doonto Diyada/Magta.
“Wakhtigaas waxaa joogay Cabdullaahi Gaafow maxamuud, Wuxuu igu yidhi isug Doorasho ayaa soo dhow , Xukuumaddu way is badashaa Xiligaa waxaa joogay Xasan sheikh, Laakiin Hay’adaha Dawladdu isma badalaan”.
“Anigu Muwaadin soomaali ah SHarcigu wuu i qabanayaa, Laakiin Hay’adihii Dawladdu hadii ay dhib gaysteen oo Xukun lagu riday, Maxaa imaanaya ? Xagee u Raadsadaa fulin, Nin sharciga ka wayn ma Jiro”.
Sharciga ilaalintiisa waxaa iska leh Madaxwayne Farmaajo, Waxaan ka codsanayaa inuu Arintaan dib u fiiriyo”. Ayuu yidhi oo Warbaahinta kula hadlay Muqdisho.
Si kastaba ma Cada Qaabka uu dilku dhacay iyo Sababta loo dilay Walaalkii, Balse wuxuu sheegay inuu Haysto Cadaymo buuxa oo la xidhiidha dilka walaalkii ee Hay’adda NISA uu ku eedeeyay.